Umuntu kungekho imfundo yezokwelapha futhi smyslyaschy kancane kwamagama yesayensi neze uyazi jaundice - iyisifo nasekuthengeni. Kunalokho, kungamandla uchungechunge ukubonakaliswa wezempilo isifo Botkin sika, sokusha kwesibindi noma izimo zokucabanga okubangelwa isifo izitho zangaphakathi, ezihlanganisa isibindi. Sibhekene nezinga umsebenzi obalulekile - Ulimi kufinyeleleke ukukhuluma mayelana nezinhlobonhlobo ingqondo izici, ukubonakaliswa kanye nokwelashwa isifo edabukisayo.
Masiqale incazelo emfushane yalesi sifo. Jaundice - a ukushintsha kombala (staining) abamhlophe samehlo, isikhumba kanye nolwelwesi lwamafinyila ngenxa emakamu zandiswe oketshezini olungenambala lwegazi sombala ikakhulukazi - bilirubin. Izimpawu, Yiqiniso nobukhali ngeke ngqo zincike imbangela yangempela, sokucasuka syndrome. Njengoba sesibonile, imbangela eyinhloko, ukushintsha umbala izingxenye zomzimba, kuba bilirubin. Wayesebenzisa umqondo kusuka e-hemoglobin.
Okweqile sombala engaqondile (unconnected nge acid) sihambisana anobuthi ezicutshini futhi izitho zomzimba wethu. Baningi kokuhlupheka futhi ukukhathazeka eletha izingane nabazali bazo. kwakhiwa i-jaundice bokuphila e izinsana ngu ukubola zamakhemikhali, kanye abomvu egazi, is ke emisipheni. Kwezinye izimo, impatho ayidingekile - uphawu wedwa ubalekela emasontweni ambalwa.
Izinhlobo jaundice kanye nezici zabo
Ngo inqubo Ukutadisha ngokucophelela sombala umzimba Ochwepheshe impahla wanquma ahlukanisa izinhlobo zokugula. ifomu ngalinye has azifani futhi iphathwa iphethini ethize. Siyaqonda zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Obstructive, noma mechanical
Ngokusho izinkulumo ezisebenzini zezempilo, ngokuvamile kwenzeka ngokumelene ingemuva izimila abulalayo ipheshana biliary, njengoba e isifo gallstone, kucace-cell carcinoma, i ehlasela helminthic. Cishe ngokuphazima kweso, kube Amabala isikhumba iso sclera jaundice. Ukwelashwa Kwenziwa futhi kancane koda imithi indlela. Uma ungathathi isinyathelo, khona-ke kukhona ukuvaleka ipheshana biliary.
A awokuthi break yabo. Uma lokhu kwenzeka, khona-ke zonke Bile ukungena emgudwini wegazi. Ngenxa yalokho, kwesibindi kwandisa ne ubende, sezinyawo ezishintshe umbala. Nge eside yokujama tsi of Bile amaseli zikhubazekile isibindi, kwaphazamisa umsebenzi wabo sokusebenza.
Utfutfukisa hlupheka obenesifo. Ngokulinganayo kutholakala ukuthi uphethwe i-jaundice cholestatic e abadala kanye nezingane. Igazi ukuhlolwa kubonisa nokwanda okuphawulekayo bilirubin, lo mbala metabolites lingekho endleni kanye nomchamo. Ukuze izinguquko isikhumba yangaphandle (iphendula aphuzi), udokotela angaba ukuhlonza isifo.
Ngenxa uhlobo nokwahlukana abomvu egazi ashaye - amangqamuzana abomvu egazi. Lesi sifo eba jaundice akha ngokushesha: ukuvuvukala isiguli ethintekayo, nakwisyncope, ukuntuleka kwegazi emzimbeni. Ngokwezibalo, uhlobo hemolytic landile izinsana. Ngenxa yokuba khona bilirubin emzimbeni, okuyinto ushevu ingane. On palpation kanye ultrasound ngokuphawulekayo lakhulisiwe ubende. Ezithathelana lesi sifo ezakhini zofuzo - kusukela izihlobo namadlozi. In the ukungabikho ukwelashwa okufanelekile futhi ezilashwayo nemiphumela ezingezinhle kakhulu.
Parenchymal, futhi ifomu hepatic
erythrocyte isihlakazeka (bilirubin unconjugated) kuthiwa zithutha egazini futhi Bile capillary ngenxa okuthile okungavamile kumaseli isibindi. Kusukela umthamo omkhulu sombala umzimba ingaphansi Ukukhathazeka okumangazayo futhi yehluleka. Ehlukaniswe palpation we ubende kanye esibindini parenchymal jaundice.
Lokhu kusiza odokotela ukuxilongwa (ngaphezu ukuhlolwa kwegazi kanye nomchamo). Phakathi uzizwa ukuhlanganisa okuningi nokwanda kwezitho zangaphakathi. Isiguli sibe izinhlungu nokuphatheka kabi. Qiniseka ukuba afeze yokwelapha esibanzi. Uma isimo sezulu sisihle, kuncike udokotela izimfuno ezingemukeleki.
I-carotene ne-jaundice ezibangelwa ukudla
Ngokusho odokotela, kumelwe ukuhlukanisa phakathi imiqondo ezifana jaundice yeqiniso neyamanga. Yikuphi isifo isiguli kungaba azimisele kuphela udokotela. ifomu carotene libhekisela zamanga. Kubonakala ngenxa imikhiqizo njalo ukudla orange-ezinemibala, ezifana izaqathe noma amawolintshi. Encwadini emitholampilo igazi, lokho kuhlolisisa kwembula inala-beta-carotene (uvithamini A), onikeza isikhumba, amehlo kanye nolwelwesi lwamafinyila umbala owolintshi.
Lokhu akusona isifo futhi ayidingi kweso lwezokwelapha. Ukuqeda umbala okungesona esingokwemvelo isikhumba kwanele ukuwakhipha kusuka imenyu imikhiqizo equkethe enzyme. Nokho, kufanele kuqondwe ukuthi zokuhlanzwa ephelele emzimbeni kusukela carotene kungadinga ezingu-12. Ukuze ugweme lokhu amandla mkhuba qapha.
Ngingaba sithathe jaundice?
Simele ingozi ukuze abantu ukusha kwesibindi kohlobo B no-C bese Lesi sifo idluliselwa ngokuhlangana ngokocansi, ngegazi, umzanyana (igazi, amathuluzi yezokwelapha, isixubho, amadivayisi nail). Esinye isifo engengaphansi esisongela kuyinto viral nokohlobo A (isifo Botkin sika). Catch isimo sokugembula kungaba ngokusebenzisa amanzi kabi aziphothula, imikhiqizo ezingahlanjiwe, izinto angcolile, ukuxhawula.
Kunezigaba ezintathu zesifo: omnene, nokulinganisela okukhulu (ubhubhane). Esimweni ngasinye, viral nokohlobo A kwenzeka ngezindlela ezahlukene. I esiyingozi kakhulu ifomu - umqedazwe. Isiguli has a sezinzwa uhlelo sifo, wandise nengozi yokuba ikhoma hepatic, imfiva. Dinga esibhedlela kanti kweso lwezokwelapha njalo.
ukubonakaliswa emitholampilo Evamile
Sithole ukuthi i-jaundice esithathelwanayo futhi ezisongela ukuphila. Thina manje ukuchaza izimpawu ukuthi ayafana zonke izinhlobo izifo. Ukwazi izimpawu zokwelashwa, umuntu uzokwazi ukuxwayisa sifo, ukudinga ukusungulwa wezokwelapha. The main lolwehlukanisa sifo - yellowness we abamhlophe samehlo, nolwelwesi lwamafinyila kanye isikhumba.
Nokho, lapho ngamunye yakha luhlaza ezahlukene. Lapho mechanical isikhumba ebusweni iba nombala ophuzi-oliva nge ithinti ensundu. ifomu Hepatic elinesimo elikhanyayo orange umbala, futhi hemolytic - lemon-ophuzi. Lesi sifo kuhambisana ukulunywa, kweNdikimba isibindi, ubende, ukubukeka spider emithanjeni, imfiva.
Lokhu kushintsha umbala umchamo - khona ibe mnyama. ukwephulwa Kubhekiwe isimiso sezinzwa: sihlushwa abantu bengasinaki, ukucasuka, ukukhathala, ukuqwasha. Ukuba khona nezimpawu ezifanayo kufanele kusishukumisele ubheke udokotela wesifunda.
Akukhona kushuba zabasebenzi ukuze ziqiniseke egunjini lokuhlolwa kwezifo. Ngu umlando, izimpawu zangaphandle, isibindi biopsy futhi izifundo zokwelapha (igazi, indle, umchamo) kalula kutholakale imbangela yalesi sifo. Obudingekayo wabelwe ezengeziwe izindlela zokuxilonga: MRI, ultrasound, isibindi scan, intubation duodenal, tomography.
Abagunyazwe ukuba linqume inqubo yokwelapha ngokwamaqiniso izifo ezithathelwanayo, Hematology, odokotela kanye odokotela abahlinzayo emva luhlolo umnyuziki yezokwelapha futhi uphethwe yini. Izindlela eziyinhloko kokuqalana nokugula: izindlela zokwelapha nokusebenza nokuziphatha phototherapy futhi Endoscopy. kokungenela Steel (ukuqedwa ukuvuvukala, nenyongo sesinye, zokwakheka, concrements kwasani) wenziwa uma zilethwe jaundice.
Ukwelashwa Lokudabuka ezithathelwanayo sifo eyenziwa unomphela kuphela - yokwelapha sesondlo isibindi. Igazi okuboniswe uhlobo hemolytic. Kahle ukuze Inhlanganisela Ukwelashwa. Dynamics Positive libonisa phototherapy, sombala ikhuthaza kabusha okwesula emzimbeni. It inikezwa kokubili abadala kanye nezinsana. Futhi ezindleleni zokwelapha zibalwa njengoba yokwamukela Izithako zokudla. Nezithasiselo bayosiza ekubuyiseleni amaseli isibindi, umzimba, detoxify. Iziguli ebekiwe izidakamizwa, hepatoprotectors (protectants kwesibindi), izidakamizwa spasmolytic. Kukhona inala izindlela zokwelashwa. Kukhethwa amasu zokwelapha isesikhathini kudokotela.
Ukudla ukusheshisa yokutakula
Kahle imenyu okunazo kuyingxenye ekwelapheni lesi simo sokugembula (ukulimala kwesibindi). Kanye imithi ukuthatha isiguli kumele zithobele Ukudla (uchwepheshe izincomo). Izingane ezingaphansi konyaka ubudala ukuthola ubisi lwebele kuphela noma ingxube kwaguqulwa.
Kusukela Ukudla ayifakiwe ngokuphelele nokunamanoni, amaqanda isikhuphasha, ukulondolozwa, isinongo, amaswidi eziyingozi (ehla, ushokoledi, amaswidi). Zonke ukudla kufanele senziwe kuphela abilisiwe, iyisitshulu, umusi, wabhaka. Ngemithamo emincane kungaba ibhotela, yemvelo izithelo candy, uju, lwebhece. Udinga ukungeza nezithelo ezintsha ngaphezulu, imifino, amakhambi. Kuthatha amaningi isiphuzo: lamanzi esiphethu, itiye, zezinkambi amakhambi, izithelo iziphuzo, jelly.
Omunye umuthi uncoma ...
Lihambisana ukwelapha ngokwendabuko, ungasebenzisa izithako amakhambi, ikhuthaza ukudedelwa Bile. Sekutholakele Iziphungo kanye infusions of dandelion, Yarrow, ukhova, calendula. Ingxenye - isigamu inkomishi kathathu ngosuku. Hhayi ukugxambukela kudle bessolevoy brine sauerkraut kanye isiraphu ye-beetroot - iziphuzo enye ngosuku (250 ml amabili ngosuku).
Zonke izinhlobo jaundice kungabangela umonakalo ongalungiseki futhi abangele yezinkinga esabekayo. Ngeke kukusize ngalutho zokugula ride. zombala Toxic alichithe nomthelela kwezitho zangaphakathi, okubangela Crigler-Najjar syndrome, iziyaluyalu Neuro-zengqondo, pancreatitis acute, hemolysis, Oncology, isifo sokusha.
Ngakho, sathula abafundi isimo esiyingozi uyazi mingcele ngobudala kubangela imiphumela eyingozi. Ukuze kugwenywe, qaphela: Gwema ukudla okusheshayo, ungaphuzi amanzi kampompi, kugeze kahle nge imikhiqizo musa uxhumane ne izilwane emgwaqweni. Ngeke sikusho ngocansi ephephile - ke kumele wazi ngayinye. Ehlome ngamathuluzi okuthola lowo uyazi futhi kuthatha izinyathelo.
Simila isibindi: ukwelashwa kanye umphumela zokwelapha